सावधान ! विभिन्न राेगकाे जाेखिम हुन्छ ३० वर्ष कटेका पुरूषहरूमा - ज्ञानविज्ञान
४० देखि ४५ को उमेर देखि मानव शरीरमा पहिलाको जस्तो शक्ति हुँदैन । उमेर बढेसँगै विभिन्न रोगका साथसाथै शरीरमा पनि परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ ।
तर, आजकलको अनब्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपानका कारण ३० वर्ष पार गरेसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न खतराहरु बढ्ने गरेको पाइन्छ । उमेर बढ्दै गएसँगै दिमागको स्मरण शक्तिमा कमी आउनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
डाक्टरहरुका अनुसार ३० वर्ष कटेपछि पुरुषमा ६ वटा गम्भीर समस्याहरु देखिन थालछन् । २० वर्षको उमेरपश्चात नै शरीरमा नराम्रो कोलेस्टेरोल बढ्दै जान्छ ।
ब्यस्त जीवनमा ब्यायामको कमीका कारण तौल नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा मोटोपना बढ्ने हुँदा शरीरमा खराब कोलस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ, जसले गर्दा मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोगको खतरा बढ्दै जान्छ । ३० वर्ष पूरा गरेका पुरुषमा इन्सुलिनको सन्तुलन बिग्रिएर मधुमेह हुने सम्भावनासमेत हुन्छ ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. प्रवीण नेपालका अनुसार शरीरमा ३० वर्ष कटेपछि क्याल्सियम तथा भिटामिन ‘के’ को कमीले गर्दा हड्डी कम्जोर भएर हड्डी खिइने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । ३० वर्ष कटेपछि पुरुषको शरीरमा हर्मोनमा कमी आउन थाल्छ ।
जसले गर्दा फर्टि्िलटीमा समेत असर पर्ने गर्छ । ३० वर्ष कटेका पुरुषहरुको शरीरको विभिन्न ठाउँको मांसपेशीमा लचीलोपन आउँछ र जिउका विभिन्न ठाउँमा दुखाइ बढ्न थाल्छ ।
३० वर्ष कटेका पुरुषहरुमा पाचन शक्तिमा पनि समस्या आउन थाल्छ । उनीहरुको पाचन शक्ति कमजोर हुन गइ, पेट बढ्दै जानुका साथै पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगहरु निम्त्याउन सक्छ । उमेर बढेसंगै कपाल पनि सेतो हुन थाल्नुका साथै आँखा पनि कमजोर हुने गर्दछ ।
हरेक पुरुषले बुझ्नै पर्ने: पुरुषहरुमा पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्दै
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी वर्षेनी बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । विशेषगरी फोक्सो, स्तन, आमाशय, पाठेघर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दो रहेको ती तथ्यांकहरूमा उल्लेख छ ।
क्यान्सर वा अन्य कुनै पनि रोग लागेमा चाडो भन्दा चाडो उपचार पक्रिया सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । रोग पहिचान र उपचारका विभिन्न प्रविधि विकास भइरहेकाले पहिलो चरणमै उपचार सुरु गरे क्यान्सरबाट डराउनु पर्दैन ।
क्यान्सर शरीरका जुनसुकै भागमा लाग्न सक्छ । त्यसमा पनि अस्पतालमा आएका क्यान्सरका बिरामीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढी छ ।
आजभोलि स्तनमा गाँठागुँठीको शंका लाग्ने बित्तिकै चिकित्सिकमा पुगी हाल्छन्, यो राम्रो सुरुवात हो ।
आफूलाई सुरक्षित राख्न कुनै समस्या नै नभए पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु अझ राम्रो हुन्छ । क्यान्सर नसर्ने रोग हो तर यो रोगले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई समाज, देश र सारा विश्वलाई नै चुनौती थपिरहेको छ ।
महिलामा सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । स्तनमा नयाँ मासु वा गाँठो आएर अनावश्यक रूपमा बढ्यो भने त्यो स्तन क्यान्सर हो ।
क्यान्सर हुँदैमा डराउने, आत्तिने गर्नु हुँदैन । स्तन क्यान्सर पुरुषमा पनि हुन्छ । हजार जना पुषहरूमध्ये एक जनालाई स्तन क्यान्सर लाग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
पुरुषमा हुने स्तन क्यान्सर शून्य दशमलव १ प्रतिशत हुन्छ । कलेजोको कारणले हुने गरेको क्यान्सर नै पुरुषमा हुने स्तन क्यान्सर हो ।
अव्यवस्थित रहनसहन र खानपीन क्यान्सरको प्रमुख कारण हो । स्तन क्यान्सर शहरीया महिलामा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
शुन्दरतामा कमी आउने डरले, व्यस्थ जीवनशैलीका कारण शिशुलाई स्तनपान नगराउने महिलामा स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ । जसले गर्दा दुध गानिन्छ र क्यान्सर हुने सम्भावन बढ्छ ।
ज्यादै मोटोपना र सन्तान नजन्माउने महिलामा पनि यो रोग जोखिम उच्च हुन्छ । सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर हुँदा केही नहुने वा लक्षण नै देखा पर्दैन ।
स्तनमा गिर्खा भए पनि नदुख्ने भएकाले थाहा हुँदैन । त्यसैले ४० वर्ष कटेपछि नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ।
जुन महिलाको महिनावारी छिटो वा सानो उमेरदेखि नै सुरु भएको हुन्छ र महिनावारी (मेनोपज) लामो समयपछि मात्र सकिन्छ, त्यस्तालाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।नियमित व्यायाम नगर्ने, पिल्स सेवन गर्ने महिलालाई पनि क्यान्सरको जोखिम हुन्छ ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार ४० देखि ५० वर्षपछि मात्रै स्तन क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ । तर, त्यसअघि नदेखिने भने होइन । युवावस्थाका ९२०–३० वर्ष० महिलामा पनि स्तन क्यान्सर देखिएको छ ।
यदि स्तनको आकारमा परिवर्तन आएको छ भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गर्नुपर्छ ।
दुधको निप्पल (मुन्टा) बाट रगत बग्ने, पानी बग्ने, पिप बग्नेजस्ता लक्षण देखिए पनि तत्काल चेकअप गर्नुपर्छ । स्तन क्यान्सर हुँदा काखीमा गिर्खा आउन सक्छ ।
जीवनशैलीमा परिवर्तन । दैनिक सागसब्जी र फलफुल बढी खाने । जंकफुड, तारेको र भुटेका खाद्यवस्तु कम खाने ।
महिलाले महिनाको एकपटक आफैँ स्तन छाम्ने वा वर्षमा एकपटक विशेषज्ञसँग सल्लाह लिने गर्नुपर्छ । जाँच गर्दा महिनावारी हुनुभन्दा अघि वा पछि गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । किनभने महिनावारी भएको बेलामा स्तन कडा हुन्छ र परीक्षण गर्दा थाहा नहुने सम्भावना हुन्छ ।
मेमोग्राम (स्तनको एक्स–रे गर्ने मेसिन) बाट नियमित चेकजाँच गर्ने गर्दा स्तन क्यान्सरको सुरुको अवस्थासहित स्तनमा भएको गाँठा पत्ता लगाउँछ । ३० देखि ४० प्रतिशत क्यान्सर दैनिक गतिविधि, खानपीन ९मद्यपान, धुम्रपानले हुन्छ ।
नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, सागपात, फलफूल बढी भन्दा बढी खाने, जंकफुड कम खाने, सेकुवा, भुटन, आगोमा पोलेर बनाइएको मासुको परिकार कम खानुपर्छ ।
पोलेको मासु आन्द्रा , खाना नलीको क्यान्सर गराउने मुख्य कारण हो । सुरुको स्टेजमा पत्ता लगाउन सक्यो भने ९९ प्रतिशत क्यान्सर निको बनाउन सकिन्छ । क्यान्सर हुनासाथ उपचार नै नहुने र मृत्यु भइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।
पोलेको मासु बढी जोखिमपूर्ण
खानानलीको क्यान्सर गराउने मुख्य कारण भनेको पोलेको मासु हो । विशेषगरी पोलेको मासुले आन्द्रा र खानानलीको क्यान्सर हुन्छ । त्यसैले पोलेको मासु खानबाट जोगिन सकियो भने क्यान्सर हुनबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
मासु पोल्दा त्यसमा भएको बोसोबाट हानिकारक रसायन उत्पादन हुन्छ ।त्यो रसायनले आन्द्रामा क्यान्सर हुने तत्वलाई बढवा दिन्छ । यसले क्यान्सर बन्ने तत्वलाई बढाउँछ ।
क्यान्सर वंशानुगत पनि हुने भएकाले समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ, क्यान्सर विशेषज्ञ डा. अम्बुज कर्ण वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
३५ कटेका अविवाहित महिलामा स्तन क्यान्सरको उच्च जोखिम
शरीरमा अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएका कोशिकाहरू समयमै नियन्त्रण नगर्दा क्यान्सर हुने गर्छ । क्यान्सर शरीरको कुनै पनि भागमा हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा स्तन क्यान्सरका बिरामी बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रोशन प्रजापतिका अनुसार स्तनमा हुने कोशिका अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनुलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ ।
अन्य क्यान्सर जस्तै स्तन क्यान्सरको पनि समयमा उपचार नगराएमा शरीरको अन्य भागमा समेत फैलिन गई मानिसको मृत्यु नै हुनसक्ने डा. प्रजापतिले बताए । स्तन क्यान्सर महिला पुरुष दुवैलाई हुने डा. प्रजापति बताउँछन् ।
‘स्तन क्यान्सर भन्नेबित्तिकै महिलालाई मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, तर त्यो होइन, महिला मात्र होइन पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर हुन्छ,’ डा. प्रजापतिले लोकान्तरसँग भने, ‘तर विश्वमा नै पुरुषमा भन्दा महिलामा स्तन क्यान्सरको समस्या बढी छ ।’
पहिलापहिला महिलामा हुने क्यान्सरमा पहिलो स्थानमा पाठेघरको क्यान्सर थियो तर पछिल्लो समय पाठेघरभन्दा स्तन क्यान्सरका बिरामी बढी देखिएको डा. प्रजापतिले बताए ।
अविवाहितमा स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च
स्तन क्यान्सर हर्मोनसँग सम्बन्धित हुन्छ । पहिला–पहिला किशोरीहरूको १८ देखि २० वर्षको उमेरभित्रमा विवाह भइसकेको हुन्थ्यो । छिटो विवाह हुँदा पहिलो सन्तान जन्माउने र स्तनपान गराउने समयमा ढिलाई भएको हुँदैन थियो । स्तनपान गराउँदा हर्मोन सन्तुलन हुन्थ्यो र महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम कम रहन्थ्यो ।
पछिल्लो समय सामाजिक चेतना र आधुनिक जीवन शैलीका कारण महिलाहरूको जीवन जिउने तरिका बदलिन थालेको छ । कतिपय महिला विवाह नगरी वा सन्तान नजन्माई आफ्नो जीवन बिताउन चाहन्छन् ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएको डा. प्रजापतिले बताए ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ३५ वर्ष कटेका अविवाहित महिलाहरू स्तन क्यान्सरको उपचारमा आउने क्रम बढ्न थालेको डा. प्रजापति बताउँछन् ।
‘हामीसँग विवाहित र अविवाहित महिलाको छुट्टै तथ्यांक त छैन, तर पछिल्लो समय अविवाहित महिलाहरू स्तन क्यान्सर भएर आउनुभएका केस धेरै छन् ।’
स्तन क्यान्सर उमेर जति बढ्दै गयो उति नै क्यान्सरको सम्भावनमा बढी रहन्छ । ३५ वर्ष उमेर कटिसकेका र स्तनपान नगराएका महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च रहने डा. प्रजापति बताउँछन् ।
‘३५ वर्ष उमेर कटिसक्दा पनि सन्तान जन्माएको छैन र स्तनपान गराएको छैन भने ती महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च हुन्छ,’ डा. प्रजापति भन्छन्, ‘त्यसैले महिलाले ३० वा ३५ वर्षअघि बच्चा जन्माएर स्तनपान गराइसकेको हुनुपर्छ, समयमा स्तनापान गराउने महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ ।’
डा. प्रजापतिका अनुसार यस्ता महिलामा हुन्छ स्तन क्यान्सरको खतरा
परिवारका कुनै सदस्यलाई स्तन क्यान्सर भएको छ भने त्यस्ता परिवारका अन्य सदस्यमा पनि भविष्यमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
पहिला सन्तान ३५ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेपछि जन्माउने महिला
ढिलो महिनावारी शुरू भई चाँडै महिनावारी सुकेका महिला
स्तनपान नगराउने महिला
विवाह भएपनि सन्तान नजन्माएका महिला
१० वर्षभन्दा बढी परिवार नियोजनको चक्की तथा विभिन्न हर्मोनको उपयोग गर्ने महिला
अनावश्यक एक्सरे गर्नेहरू
मदिरा तथा चुरोट सेवन गर्ने बोसो भएको खाद्य पदार्थ खाने महिला
स्तन क्यान्सरका लक्षण यस्ता हुन्छन्
स्तनको कुनै पनि भनगमा दुेख्ने वा नदुख्ने गिर्खा आउनु ।
दुवै स्तनको आकार फरक देखिनु ।
स्तन सुन्निएर कडा भई दुख्नु ।
स्तनको मुन्टाबाट रगत तथा अन्य पदार्थ निस्कनु ।
काखीमा स–साना गिर्खा आउनु ।
स्तनको छालामा रंगमा परिवर्तन आउनु ।
स्तन क्यान्सरको समयमा उपचार गरिएन भने स्तन क्यान्सरले महिलाको ज्यान समेत जान्छ । तर स्तन क्यान्सरको समयमै पहिचान गरी रोग रोकथाम र उपचार गर्न सकिने डा. प्रजापति बताउँछन् ।
‘स्तन क्यान्सरबाट बच्नका लागि नियमित शारीरिक व्यायाम, स्वस्थकर खानपान, समय सयममा चेकपअ गर्नुपर्छ,’ डा. प्रजापति भन्छन्, ‘स्तन क्यान्सरबाट बच्नका लागि समयमा पहिलो सन्तान जन्माएर स्तनपान गराउन जरुरी छ ।’
Don't Miss it नङ फुल्दा नयाँ लुगा आउने हाेइन , राेग आउने गर्दछ – जान्नुहाेस्
Up Next खाना खाँदा गरिने गल्तिहरु जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ